Iapile iya kuthatha indawo yeeyunithi ze-iphone 6 kunye ne-iphone 6 kunye nokudibanisa
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Apple iya kuthatha indawo yeeyunithi ezonakalisiweyo ze-iPhone 6 Plus nge-iPhone 6s Plus ukuya ngoMatshi
Ke nantso ke, imidlalo ye-Apple iPhone 6 Plus engasebenziyo enokuthi ngesizathu esinye okanye esinye, ilungele iyunithi yokutshintsha nge-Apple. Ewe, silapha ukukunika iindaba ezimnandi. Imemo yangaphakathi ye-Apple, ethunyelwe ku-Apple Authorized Service Provider, ithi ukusukela ngoku ukuphela kuka-Matshi, 'iiodolo zoluhlu lweenkonzo zeyunithi zeemodeli ze-iPhone 6 Plus zinokufakwa endaweni ye-Apple iPhone 6s Plus. '
I-Apple iPhone 6s Plus ngesiNgesi esicacileyo, oko kuthetha ukuba ukuba ulungele ukutshintshwa ngokupheleleyo kwe-iPhone 6 yakho, unokufumana ithamsanqa kwi-iPhone 6s Plus endaweni yoko. Uxwebhu lwangaphakathi oludala luveze ukuba iApple ayisenzi i-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus, into ethetha ukuba abo basebenzisa iApple kunye neapos s $ 29 ukutshintshwa kwebhetri kwezi zibini kunzima ukufumana iVenkile yeApple okanye indawo yokulungisa egunyazisiweyo. iseli efanelekileyo kwisitokhwe Ngenye imini, sikuxelele malunga neentatheli ezimbini ezahlukileyo ze-CNBC ezingakwazanga ukubuyisela ibhetri kwi-iPhone 6 yazo kuba zombini iVenkile yeApple kunye neyona ndawo ithengwa ngokuBalaseleyo, zombini kwisiXeko saseNew York, beziphelile. Inkqubo ye- Ivenkile yeApple kwisitrato se-14 ilindele ukuzalisa uluhlu lwayo kwiiveki ezimbini .
Ngemfuno enzima yeebhetri ze-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6 Plus, iApple inokuthi ibaleke kuludwe lwayo oluseleyo lwezo fowuni. Ukuqalisa imveliso kwakhona ukuhlangabezana neemfuno zeeyunithi zokutshintsha kunye neebhetri kunokuthatha ixesha.
Gcina ukhumbula ukuba ukuba i-iPhone yakho ithatha indawo yokubethelwa, ayizukufanelekela iyunithi entsha yokutshintsha. Ukulungela ukutshintshwa kwesixhobo sonke, i-handset yakho kufuneka ibe nomonakalo kwibhodi yomama wayo, isinxibelelanisi sombane, okanye icandelo elingenakutshintshwa ngokulula. Kwaye nokuba sele unikwe ukukhanya okuluhlaza ukuba uvule i-Apple iPhone 6 Plus yakho ukuze ungene endaweni yayo, oko akuqinisekisi ukuba uza kufumana i-iPhone 6s Plus endaweni yoko.
Kukho umahluko omkhulu phakathi kwe-iPhone 6 kunye ne-iPhone 6s Plus. Imodeli endala ixhotyiswe yi-Apple A8 ene-CPU encinci ye-64-bit esebenzayo kwisantya seewotshi se-1.4GHz kwaye ibandakanya iPowerVR GX6450 GPU. I-iPhone 6s Plus ibeka i-A9 SoC nge-64-bit ezimbini-ezingundoqo ze-1.84GHz CPU, kunye nePowerVR GT7600 GPU. Ukongeza, i-iPhone 6s Plus iliphinda kabini inani le-RAM elifunyenwe kwimodeli endala, ukuya kwi-2GB. Kwaye ikhamera ekweli yunithi iza nokuphucula okuhle ukuya kwi-12MP ngasemva kunye ne-5MP ngaphambili ukusuka kunyaka ongaphambili & apos; s 8MP kunye ne-1.5MP, ngokwahlukeneyo.
Inqaku le-Samsung Galaxy S21 5G yasimahla xa utshintshela kwi-UScellular (akukho zorhwebo)